Shirkii Wadatashiga Hindise Sharciyeedka Korontada Dalka oo Muqdisho lugu soo Gaba-gabeeyay+Sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Muqdisho (SONNA)- Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Marwo Fowsiyo Maxamed Sheekh ayaa soo xertay shirkii wadAtashiga hindise sharciyeedka koronta oo maalmahaan la yeelanayeen Wasaaraddaha Tamarta Dowlad goboleedyada,Gobolka Banaadir iyo shirkadaha korontada dalka .
Ka dib dood adag ayaa ugu dambeyn lagu hiishiisiyay in hindisahaan uu kasoo gudbo arragti wadaaga iyagoo ay soo dhaweeyeen xubnaha shirkadaha gaarka iyo dowlad goboleedyada.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka biyha ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya Cismaan Libaax Ibraahim ayaa sheegay in sharcigaan lasoo galiyay juhdiga badan iyagoo laga soo shaqeynayay muddo ka badana sanad.
“Waxaana ka soo shaqeyneynay Sharcigaan muddo labo sano ah waxaana ka soo qabanayay howlo aday,hase ahaatee haduu dhaqan galo waxa uu noqon doonaan guul usoo hoyatay dadka Soomaaliyeed”Ayuu yiri wasiir libaax.
Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Khayraadka Biyaha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Marwo Fowsiyo Maxamed Sheekh ayaa uga mahadcelisay ka qeyb-galayaasha sida ay ugala shaqeeyeen in dalka uu yeesho sharci haga tamarta dalka waxaana ay intaa ku dartay In dhawaan ay hor geyn doonaan golaha wasiiradda si ay umeeriyaan kadibna la marsiin doonaan heerarka uu ubaahanayahay.
“Waxaan rabnaa inaan hor geyno golaha wasiiradda xukumadda ,kadib waxaan u gudbin doonaa Barlamaanka ,waxaana uga mahadcelineynaa dhammaan xubnaha dowlad Goboleedyada,Gobolka Banaadir iyo shirkadaha koronatadda dalka”ayay ku dartay wasiir Fowsiyo.
Hindise sharciyeekaan koronta ayaa ah mid ay baahi farabadan u qabaan guud ahaan Bulshada Soomaaliyeed, si ah uhelaan adeegyadii ay uga baahnaayeen dowladdooda hase ahaatee Wasaaradda tamarta ayaa xoogga saareysa sidii loo dhameystiri lahaa maadaama uu yahay mid ka mid sharciyadda aas aasiga u ah bulshada.